ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Psyche & seduction ခွင့်လွှတ်ခံရပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေရန်အကောင်းဆုံးသောစာပိုဒ်တိုများ
ရန်ပွဲသို့မဟုတ်အနည်းငယ်အငြင်းအခုံပြီးနောက် နောက်တစ်ခုကအဆိုးဆုံးအခြေအနေ, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ပါဘူး မာနကြီးတယ် မကြာခဏဆိုသလိုသင်အမှားလုပ်မိသည်ကိုဝန်ခံရန်ခဲယဉ်းသည်။
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဘက်၌ရှိသောသူသည်ကျန်ရစ်၏ ၎င်း၏ရာထူးအပေါ်မြဲမြံမှားတဲ့ဘက်မှာရှိသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးတတ်နိုင်သမျှခုခံကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး စွာ၊ စစ်မှန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သင့်ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတိုလေးပေးပါ။
ပထမ ဦး စွာနှစ်ဖက်စလုံးကကြိုးစားအားထုတ်ရမည် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်ကနေစရမလဲ။ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်တောင်းပန်; စကားလုံးများမအောင်မြင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည် တောင်းပန်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောစာပိုဒ်တိုများစာရင်း မူရင်းလမ်းနှင့်ခွင့်လွှတ်ပါ
ကြောက်ရွံ့ခြင်း မကောင်းတဲ့စှဲစေရန် oppure မသင့်လျော်ပါစေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာရင်းထဲတွင်တည်ရှိရန်မနည်းလမ်းရှိပါတယ် မင်းကိုကိုယ်စားပြုတဲ့စကားစုကိုမင်းသေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မယ် ၎င်းသည်သင်ဂရုစိုက်သူအားခွင့်လွှတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်အသုံးပြုမည့်ကြားခံသည်အရေးမကြီးပါ - သင်လုပ်နိုင်သည် မျက်စိထဲမှာဖြောင့်ရှာဖွေနေအသံကျယ်ထွက်ကပြောပါ အခြားသူ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်စာတစ်စောင်ပို့ပါ oppure သင်အကြိုက်ဆုံးစကားစုနှင့်အတူကဒ်ပို့ပါသင်၏အမူအယာကိုသတိမပြုမိဘဲနေလိမ့်မည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ရန်တွေ့ခြင်းမကြာခဏတစ် ဦး အစေခံ ဆက်ဆံရေးကိုအသကျရှငျပါစေမင်းကပုံကြီးချဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရင် တောင်းပန်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ငါတို့မကြာခဏသိသည် နေ့စဉ်အသက်တာ၌အခြေအနေများသည်အလွန်စိန်ခေါ်မှုရှိပါသည် ဆက်ဆံရေးအီး၏ပင်အပြင်းထန်ဆုံး တစ် ဦး banality မှစ။ ငါတို့သည်ပင်ကာတွန်းကားအငြင်းပွားမှုအဆုံးသတ်။ ပြီးတော့အဆုံးမှာလား။ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ရှိပါတယ် သငျသညျမှုတ်သွင်းနိုင်ပါတယ်စာပိုဒ်တိုများ။
တောင်းပန်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ခေါက်သင့်နှလုံးသားရဲ့သော့ကိုငါပေးမယ်လို့ကတိပေးပါရစေ။ ချစ်သောသူကိုခွင့်လွှတ်ပါ Anonimo
ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး ကျွန်ုပ်အမှားအမှန်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပြီးကျွန်ုပ်အမှားကိုပြုပြင်ရန်အရာအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုငါချစ်ပြီးနောက်ဆုံးငါလုပ်ချင်တာကမင်းငါ့ကြောင့်ဆင်းရဲခံရတာကိုမြင်ရလို့ပါ။ Anonimo
အငြင်းပွားမှုကိုရပ်တန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသာပြောခွင့်ပြုကြပါစို့၊ သူတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ခင်စွာနားလည်ကြလိမ့်မည်ကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ Anonimo
ကျွန်ုပ်တောင်းပန်ခြင်းသည်သင့်အတွက်မလုံလောက်ကြောင်း၊ စကားလုံးများပျံသန်းသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအချက်အလက်များဖြင့်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမည်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ပါသည် Anonimo
ငါ့အမှားကြီးကမင်းကိုငါ့အတွက်အရေးမကြီးဘူးလို့မင်းကိုယုံကြည်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုဆုံးရှုံးတာဟာငါကိုယ်တိုင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုဆုံးရှုံးတာနဲ့တူတယ်။ Anonimo
မင်းကိုငါဘယ်တော့မှမနာကျင်စေချင်ဘူးလို့ငါကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုယ်ကိုငါကိုယ်တိုင်လုပ်မိလို့ ... ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ! Anonimo
ငါလုပ်ခဲ့တာကိုတရားမျှတဖို့ဆင်ခြေမရှာဘူး။ ငါမှားသွားပြီဆိုတာနောက်ကျမှသိတယ် ငါပြောနိုင်တာတစ်ခုကမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ပြီးရယူဖို့ငါကြိုးစားမယ်။ Anonimo
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကကျွန်မရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပဲ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်မမသိခဲ့ပါဘူး။ အခုငါဟာငါ့အတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်စေချင်တယ်။ Anonimo
ငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုမဖျက်ချင်ပါဘူး အဲဒါကအပြစ်မဲ့တဲ့အမှားပဲလို့ငါဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ကျွန်ုပ်အပြစ်များသည်ကျောက်တုံးများကဲ့သို့လေးလံ။ လေးလံပါသည်။ ငါကအပြည့်အဝတာဝန်ယူပါ။ ဒီကနေငါမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်ရချင်တယ်။ Anonimo
တောင်းပန်ပါတယ် - ငါရှင်းနေပါတယ်။ Anonimo
နားလည်မှုလွဲခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးသတ်လိုမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံပါ၊ Anonimo
မင်းကိုငါဘယ်တော့မှမနာကျင်စေချင်ဘူးလို့ငါကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုယ်ကိုငါကိုယ်တိုင်လုပ်မိလို့ ... ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ! TO သို့နတ်သမီး
သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးဂရုစိုက်သူကိုသင်နာကျင်သောအခါအမှားကိုဖြေရှင်းရန်စကားလုံးများမရှိပါ။ ဒါကြောင့်မို့ငါဟာစကားလုံးတွေနဲ့တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘဲလုပ်ရပ်တွေနဲ့တောင်းပန်တာမဟုတ်ဘူး။ နေ့စဉ်အခွင့်အရေးနည်းနည်း၊ မင်းကိုငါ့ကိုအခွင့်အရေးပေးရင်။ TO သို့နတ်သမီး
မင်းကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါရွေးချယ်လိုက်တာကိုနောင်တရမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ပဲမင်းရဲ့အရေးပါမှုကိုယနေ့ပဲငါနားလည်ခဲ့တယ်။ TO သို့နတ်သမီး
ချစ်ကြည်ရေးသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ဘဝတွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အပေါ်အမြဲတမ်းအားထားနိုင်၊ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သူ့ကိုခေါ်ပါeအနားမှာသူ့ကိုခံစားပါ ဒီအရာတွေကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမေ့သွားပြီးအရာရာတိုင်းပြိုလဲသွားသည်။ အနည်းငယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွ မင်းအနားယူတော့မယ် အဆိုပါဆေးတစ်လက်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးများကိုလုံလောက်သောရှိပါတယ်။
ငါပျောက်ချင်တယ်။ ငါတကယ်သေပြီ၊ ငါအမှားလုပ်မိမိတယ်။ TO သို့နတ်သမီး
ငါတောင်းပန်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါပြုခဲ့သောထိခိုက်မှုကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းငါသိ၏, ဒါပေမယ့်ငါအချိန်တန်သောအခါသင်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Anonimo
အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာမင်းကိုငါမရပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာအနာရောဂါမဖြစ်နိုင်တဲ့အနာတစ်ခုပဲ၊ ဒါပေမယ့်မင်းကိုမင်းကငါ့ကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့အနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးချင်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ Anonimo
ဒီဝါကျကိုမင်းထံအပ်နှံလိုက်ရင်တောင်းပန်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ မင်းသေဖို့မင်းကိုချစ်တဲ့အတွက်မင်းသူတို့ကိုလက်ခံနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Anonimo
ငါကမှားခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခွင့်လွှတ်ပါကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့။ Anonimo
တောင်းပန်ဖို့မလိုချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အဲဒါတွေကိုတကယ်ကြားဖူးတယ်ဆိုတာမင်းနားလည်တယ်။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ! Anonimo
မင်းကဘဝကမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါသူမနဲ့တွေ့တဲ့သူပါ၊ ငါမှားနေတယ်၊ ​​ငါဘယ်လောက်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူး၊ ငါဒီလောက်ပြန်လာနိုင်ဖို့ဒီလောက်များတာဘယ်တော့မှမတွေ့ဖူးဘူး ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်နှင့်အမှားတွေမပါဘဲကျော်စတင်ပါ။ တောင်းပန်ပါတယ်၊ Anonimo
စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ... တောင်းပန်ပါတယ်! ငါတောင်းပန်ရမည့်အမျိုးအစားမဟုတ်သော်လည်းဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာသည်။ တောင်းပန်ခြင်းကိုခံယူရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏တောင်းပန်မှုကိုလက်ခံရန်သင်တောင်းပန်ပါ။ Anonimo
မင်းမှားနေရင်အရေးကြီးတာကအဲဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့၊ နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတောင်းပန်ဖို့ပဲ။ ဒီအဆင့်သုံးဆင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်လွှတ်ပါ။ Anonimo
မင်းနှလုံးသားထဲငါယူဆောင်လာသည့်မကောင်းမှုအတွက်ခွင့်လွှတ်ပါ။ မင်းကိုငါခွင့်လွှတ်ပြီးဖျက်လို့မရအောင်မင်ဖြင့်ထိုးထားလျှင်ထိုနေ့ကိုပယ်ဖျက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ပါတယ် Anonimo
မိသားစုကစကားများတယ် သူတို့ကငါတို့ကိုအများဆုံးခံစားရစေတဲ့သူတွေပဲ။ မိသားစုက ငါတို့မွေးထားတဲ့နေရာ ငါတို့ကြီးပွားတယ်၊ သင်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုကိုအမြဲရှာဖွေနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများကိုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်စေသည်။ မိခင်များကလျစ်လျူရှုခံရသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဒေါသထွက်ကြသည်, အဖေကိုနားထောငျကြသည်မဟုတ်ငါ ကလေးများသည်၎င်းတို့နားမလည်ကြောင်းတိုင်ကြားကြသည်။ ငကုစားရန် မေမေကိုတောင်းပန်ပါ al ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး, ကိုကို အစ်ကို (သို့) အစ်မဒီမှာအကြံဥာဏ်တချို့ရှိတယ်။
တစ်ခါတလေတောင်းပန်ဖို့မလွယ်ဘူး၊ ငါနားလည်တယ်၊ အချိန်ကကိစ္စရပ်တွေဖြေရှင်းလိမ့်မယ် ... ဒီအတောအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေကြောင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စိတ်ပျက်မိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ Anonimo
ငါအမှားလုပ်မိတာတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ များစွာသောအရာတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းငါတို့ဟာခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးငါတို့အားလုံးကသူ့စံနမူနာကိုလိုက်လျှောက်ရမယ်။ မင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေရင်မင်းကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်လည်းငါ့ကိုတောင်းပန်ပါအုံး။ Anonimo
မင်းကိုငါလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်၊ မင်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တော့ဘူး၊ ငါပြုံးလိုက်ပြီးမင်းရဲ့နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်နိုင်တဲ့အပြုံးကိုလင်းစေချင်တယ်။ Anonimo
အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်တောင်းပန်ခြင်းသည်အသုံးမကျပေ။ သို့သော်ကျွန်ုပ် ထပ်၍ မပြောနိုင်ပါ။ Anonimo
တောင်းပန်မှုကအသုံးမ ၀ င်ဘူးဆိုတာငါသိပေမယ့်တစ်နေ့ကျရင်မင်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Anonimo
ငါပျောက်ချင်တယ်။ ငါသေပြီ၊ အမှားတစ်ခုလုပ်မိမိတယ်။ Anonimo
မင်းအမှားလုပ်မိရင်တောင်းပန်ပါ၊ သင့်ခွင့်လွှတ်မှုကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ပါလိမ့်မယ်။ Anonimo
ခွင့်လွှတ်ခံရရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်မှားကြောင်းသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ပြန်သွားနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Anonimo
သင်သည်သင်၏အမှားများကိုဝန်ခံပြီး၎င်းတို့အတွက်တာဝန်ယူရမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ၊ Anonimo
ငါအမှားအယွင်းတစ်သန်းလုပ်မိတယ်၊ ငါမှားတယ်၊ အမှားထဲမကျမိဖို့ငါတကယ်မျှော်လင့်တယ်။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ! Anonimo
မင်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်မင်းကိုသက်တံတွေယူလာမယ်။ မင်းကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပန်းသီးမုန့်ချက်ပြုတ်မယ်။ မင်းကိုချစ်တဲ့ဖိနပ်ချေးပါ၊ မင်းရဲ့ကားကိုလျှော်ပြီးအကောင်းဆုံးပြုံးပြပါ့မယ်။ Anonimo
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကိုမပြောင်းလဲစေပါ၊ Paul Boese
ငါတို့ရှိသမျှသည်အားနည်းချက်များ၊ အမှားများနှင့်ရောနှောနေကြသည်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ခွင့်လွှတ်ကြပါစို့။ ဤသည်မှာသဘာဝနိယာမတရားဖြစ်သည်။ ဗော်တဲယား
ခွင့်လွှတ်သူသည်တိုက်ခိုက်သူထက် ပို၍ အားကြီးသည်။ နေသန် Croall
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် 'ရွေးချယ်သောမှတ်ဉာဏ်' ဖြစ်သည် - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်ကြွင်းသောအရာများအားလွှတ်ပေးရန်သတိရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ Marianne Williamson
အမှားပြုမိခြင်းသည်လူသားဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်မြင့်မြတ်၏။ ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ အလက်ဇန်းဒါးပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး
တရားမျှတမှုမရှိဘဲငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲတရားမျှတမှုမရှိ။ Karol Wojtyla
ယခင်ဆောင်းပါး“ La Casa di carta” သည် Game of Thrones ထက်သာလွန်သည် - ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြည့်အရှုဆုံးရုပ်သံလိုင်းဖြစ်သည်
Amazon တွင်အကောင်းဆုံး espresso စက်များ
Taurus Ascend: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အဓိကလက္ခဏာများ